Mbido AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Brazil Rodrygo na-aga Akụkọ nwata
LB na-egosi Full Story of a Football Genius onye aha ya bụ “Ndị New Neymar".
Anyị Rodrygo Silva de Goes Childhood Story Plus Untold Biography Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị ama ama site n'oge ọ bụ nwata ruo ụbọchị.
Rodrygo na-aga Akụkọ nwata - Nyocha rue ụbọchị.
Ee, onye ọ bụla maara na ọ bụ Ngwá Ngwá Ngwá Ngwá Ngwá Agha Na-enweghị Agbanwe Nke Real Madrid Na-enweghị Ike Misshapụ. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle akwụkwọ akụkọ Rodriygo Goes nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Rodrygo na-aga Akụkọ nwata - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
A mụrụ Rodrygo Silva de Goes na ụbọchị 9 nke Jenụwarị 2001 na nne ya, Denise Goes na nna, Eric Batista de Goes na steeti Sao Paulo, Brazil. N'okpuru ebe a bụ foto nke nne na nna ya mara mma.
Rodrygo na-aga Akụkọ nwata.
Rodrygo bụ nke alụmdi na nwunye na -aga nke ọma n'etiti nne na nna ya mgbe ha abụọ dị afọ iri na ụma. Rodriygo nna Eric dị afọ 34 ugbu a dị ka n'oge (Ọgọstụ 2019) edere edemede a.
Nne ya kwesịkwara ịdị na mmalite afọ 30 ya. Nke a site na ntinye pụtara na nna ya nwere ya mgbe ọ dị naanị afọ 17.
A mụrụ Rodrydo dị ka nwa mbụ nye ndị mụrụ ya. O tolitere dị ka naanị nwa ha mụrụ ruo ọtụtụ afọ, n'enweghi nwanne ma ọ bụ nwanne.
Ezinụlọ Rodrygo Goes sitere na obodo Osasco dị na steeti Sao Paulo. Ọ bụ otu n'ime obodo bara ọgaranya na Brazil site na nha GDP.
Rodrygo na-aga site na ezinụlọ. Ebe E Si Nweta CGarchitect.
Obodo Sao Paulo nke ọrụ n'aka ebe Rodrygo toro nwere ọtụtụ ụgbọ ala karịa Rio de Janeiro nwere ndị mmadụ. Ọzọkwa, ọ bụ obodo ama ama na -eri nde 1 n'ime nde pizzas nde 1.6 nke ndị Brazil niile riri.
Rodrygo gara agụmakwụkwọ:
Rodrigo tolitere n'ezinụlọ klaasị nke ego ya sitere na egwuregwu. Nna ya malitere ndụ dị ka onye egwuregwu bọọlụ na bọọlụ dị ala nke Brazil nke mere na ọ nweghị ego zuru oke maka ezinụlọ ya.
N'inwe nwa ya nwoke na nwata, Eric maara na ọ gaghị enwe ihe ịga nke ọma n'ọrụ ya. Ọ chepụtara atụmatụ iji nọgide na -ebi nrọ nrọ ya site n'aka nwa ya nwoke, Rodrygo.
Na mbido, Rodrygo malitere ịgbapụ bọọlụ ya n'ime ụlọ ezinaụlọ ya, ihe ngosi nke kpaliri ịhụnanya ya maka egwuregwu mara mma. Mmụta bọọlụ sochiri ozugbo maka nduzi nna ya.
Eric onye na -akwado Real Madrid hụrụ na nwa ya nwoke na -eulateomi nka na ụzọ ọrụ ya Robinho onye ha lere anya di elu.
E gosipụtara Rodrigo na vidiyo nke Robinho mana o depụtachara ihe ọ bụla ọ na -eme. Mgbe ọ dị afọ 9 mgbe ọ nwetara oku iji soro Santos gaa ule, mpako nna ya amaghị oke.
Rodrygo na -aga akụkọ ndụ ya - ndụ ọrụ mbido:
Rodrygo Goes nwere mmasị maka ịgba bọl hụrụ ya ka ọ na -agafe ule na agba na -efe efe wee sonye na ụlọ akwụkwọ Santos nke nyere ya ntọala ọrụ ya. Mgbe ị na -esonye na usoro ndị ntorobịa nke Santos na 2010 mgbe ọ dị afọ 10.
Ndị nne na nna Rodrygo siri ọnwụ na ekwesịrị ka ekenye nwa ha nwoke ndị otu futsal klọb. Nke a bụ ụzọ arụsị bọọlụ ezinụlọ, ọ nweghị onye ọzọ ma ọ bụghị akụkọ ifo Robinho.
Site na afọ 10, Rodrygo malitere igwu egwu na ụmụ nwoke toro na okenye. Ọ na -apụta mgbe niile n'egwuregwu ya.
Ịkpọ Futsal dị ka onye na -aga n'ihu nyeere ya aka ịnwe usoro nke idobe bọọlụ n'ụkwụ ya, na -akụda ndị na -agbachitere ya n'oge gara aga, na iji ọsọ ya na -eme ihe mgbaru ọsọ.
Rodrygo na-aga Ndụ Ndụ Oge. Ebe E Si Nweta Anyanwụ.
Nke a bụ udiri ụdị nke Robinho nwere n'oge egwuregwu mbụ ya na Futsal. Dị ka Rodrygo gara n'ihu na -etolite, ọ hụrụ onwe ya ka ọ na -abụ onye kacha mma n'etiti ndị ọgbọ ya.
Ihe ngosi a wetara nrụgide mgbe niile ka ọ rụọ nke ọ nwere ike ijikwa wee bụrụ onye isi ndị otu ntorobịa ya.
Rodrygo Goes- comingghọ onye ndu ntorobịa.
Rodrygo gara bio - okporo ụzọ ama ama akụkọ:
Ka Rodrygo rutere afọ 16, mkparịta ụka gbasara nkwekọrịta ndị ọkachamara na agụmakwụkwọ bilitere. Na Machị 2017, onye njikwa Dorival Júnior kpọrọ ya ka ọ bụrụ ndị otu mbụ.
Rodrigo mere Copa Libertadores mpụta mbụ ya na 1st nke Mach 2018 mebiri ndekọ dị ka onye ọkpụkpọ Santos nke ọdụdụ pụtara na asọmpi afọ 17 na ụbọchị 50.
Ka izu abụọ gachara n'otu asọmpi ahụ, Rodrygo gbara ihe mgbaru ọsọ mbụ ya n'asọmpi ahụ.
Ihe ngosi a mere ka ọ bụrụ onye ntà mgbe ọ bụla onye Brazil gbara akara na Copa Libertadores. Enyere Rodrygo onyinye Campeonato Paulista kacha ọhụrụ maka 2018.
Rodrygo gara na onyinye Campeonato Paulista.
Rodrygo na -aga akụkọ ndụ - Bilie na akụkọ ama ama:
Rodrygo diri ntuli aka meteoric ka ọ bụrụ onye a ma ama ka ọ bụrụ otu n'ime akụrụngwa kacha ewu ewu na South America, ịrị elu nke enwere ike iji ya tụnyere nke arụsị ya Robinho nwetara.
Ọmarịcha nka ịdọ aka na ntị ya dọtara ndị na -egwu Real Madrid n'oge ahụ nọ na mwakpo ha na -enweghị njedebe na ndị egwuregwu South America, otu n'ime ha nọ. Vinicius Junior.
Nke a bụ ụbọchị kacha mkpa na ndụ ya nke mechara mechaa. Daybọchị Rodrygo mezuru nrọ ya site na ịbịanye aka na Real Madrid na nkwekọrịta gosiri na a ga -ebu ya akwụkwọ tupu oge eruo.
Kpọmkwem on na 15th nke June 2018, Real Madrid na nkwekọrịta na Santos maka nkwekọrịta nke Rodrygo, nkwekọrịta nke malitere na mgbe otu afọ gasịrị, June 2019.
Nke mbụ, ọ bụ nchere afọ 1, mgbe ahụ, oge mmetụta uche bịara maka Rodrygo Goes ka ndị mụrụ ya sonyeere ya na-ekwu okwu ọma banyere klọb ụmụaka ọ hụrụ n'anya.
Rodrygo Goes nwere mmetụta mmụọ ka ọ na -ekele Santos ọ hụrụ n'anya. Ebe E Si Nweta IG.
“Ọ na-akpali m ịga Madrid, otu n’ime klọb kasịnụ n’ụwa. Maka ogo klọb, ọ na-atụ m ụjọ, mana ezigbo egwu. Ọ na-akpali m karị na ọ pụtara na ọ dị m n'aka igosi ihe mere ha ji nwee ntụkwasị obi na m na ịbịanye aka na m. "
Rodrygo kwuru mgbe ọ na-apụ.
Rodrygo bụ N'ezie otu kachasị mma n'etiti ahịrị mmepụta na-adịghị agwụ agwụ nke ndị na-aga n'ihu dị ịtụnanya na-apụta na Brazil.
Maka anyị, a na-ewere ya dị ka nkwa mara mma na-esote Brazil football mgbe Neymar Jnr. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Rodrygo Gove Life Ndụ:
N'iburu n'uche na nne na nna ya lụrụ nwanyị n'oge ha dị afọ iri na ụma, ọ bụ ihe ziri ezi ịjụ ma ọ bụrụ na Rodrygo nwere enyi nwanyị ma ọ bụ nwunye na nwata.
Rodrygo na -aga ndụ mmekọrịta.
Rodrygo na-ebili ka ama ama na isonyere Real Madrid hapụrụ ndị kwere kwenyere na a enwere ike ịnwe ihunanya nzuzo enwere ya, ikekwe onye na-enyocha nyocha nke ọha na eze naanị n'ihi na ndụ ịhụnanya ya bụ nkeonwe yana ikekwe ihe nkiri.
Dị ka n'oge edere, anyị kwenyere na Rodrygo ahọrọla ilekwasị anya na ọrụ ya ma na-achọ izere ntụpọ ọ bụla na ndụ nzuzo ya, na-ahapụ enweghị nkọwa banyere ndụ ịhụnanya ya na akụkọ ntolite.
Rodrygo na-aga ndụ nke onwe:
Tomara Rodrygo Ga-aga ndụ ọpụpụ na pitch ga-enyere gị aka ịmata onye ọ bụ nke ọma.
N'ọpụ n'egwuregwu, Rodrygo nwere ọnọdụ nnwere onwe nke na -enyere ya aka inwe ọganihu dị ukwuu na ndụ ya.
Ọkachamara mara mma na -ebi ndụ nkịtị na mpụga pitch mgbe ịnọ na Brazil. Na -ekpe ikpe site na foto dị n'okpuru, o kwesịghị iju gị anya ịhụ Rodrygo ka ọ na -eji skateboard n'okporo ụzọ Madrid.
Rodrygo Go na Skateboard.
Nakwa na ndụ onwe ya, Rodrygo Goes nwere àgwà nke njide onwe onye, ​​ikike ime atụmatụ siri ike na nke ziri ezi maka ndụ ya.
Ọ bụ onye ndu nke nwere ike iduzi ụzọ dị ka a hụrụ n'oge ụbọchị ọchịchị ya na ọkwa ntorobịa.
Rodrygo gara ndụ ezinụlọ:
Rodrygo Goes nne na nna na ndị ikwu na -aghọrọ uru ugbu a ịkụnye echiche siri ike n'ime ya. Ndị mụrụ ya nwere ekele maka nkwado nwa ha nwoke maka Real Madrid site na mmalite nke ọrụ ya.
Lee mpempe akaebe vidiyo n'okpuru ebe Rodrygo dị afọ 9 guzoro na ndị mụrụ ya na uwe elu Real Madrid ochie. Egosiri nke a n'akụkụ foto 2019 yiri ya.
Foto Ezinụlọ iji gosipụta ihe akaebe na Rodrygo abụwo Real Madrid Fan kemgbe ọ bụ nwata. Ebe E Si Nweta Marca.
Banyere Rodrygo Na-aga Nna:
Nna Rodrygo dị afọ 34 dị ka n'oge ederede.
Ị maara?… Eric Batista sere n'okpuru ya na nwa ya nwoke lara ezumike nká n'oge na-adịbeghị anya site na ọrụ ọ na-egwu dị ka ikike na-ebi ugbu a nrọ nna ya dị ka onye na-elekọta ọrụ nwa ya.
Rodrygo Goes na Nna ya - Eric Batista de Goes. Ebe E Si Nweta IG.
Eric Batista ndị enyi ya na ndị ikwu ya na-elekarị ya anya dị ka “oge gboo Brazil”Gbara na mpaghara mpaghara Sao Paulo n'ihe ọtụtụ mmadụ ga -asị na ọ bụ ọrụ na -emeghị nke ọma.
Banyere Rodrygo Luru mama:
A bịa n'ihe gbasara ndị egwuregwu bọọlụ nwere ezigbo ọmarịcha nne, anyị nwere ike ịsị na Rodrygo gara n'elu ndepụta ahụ.
Denise Goes abụghị naanị mara mma kama ọ bụ nwata (na mmalite afọ 30) dị ka n'oge ederede.
Rodrygo gara nne- Denise na-aga.
Mgbe ị na-adagharị na foto ahụ na mbido nke mbụ na-enweghị onye ọ bụla ọ maara, ị nwere ike iche na ọ bụ Nwanyị Rodrygo.
Rodrygo aga nwanne:
Na mbido 2018, nne na nna Rodrygo mụrụ nwa nwanyị, nke bụ nwanne Rodrygo.
Inwe obere nwanne nwanyị mere ka ọ nwee mmetụta nke ịbụ nna yana kwa, n'ịghọta na ọ tolitela. Dị ka a hụrụ n'okpuru, njikọ miri emi dị n'etiti nwanne nwoke na nwanne nwanyị.
Rodrygo Goes gosipụtara ịhụnanya maka nwanne ya nwanyị nke nta. Ebe E Si Nweta IG.
Rodrygo na-aga LifeStyle:
Dị ka ibe ya Takefusa Kobo, Rodrygo nwekwara ntọala siri ike site na nne na nna ya. Ọ mụtala otu esi ejigide ego ya maka ndị nne na nna ya.
Dị ka n'oge edere, anaghị ekwe ka Rodrygo bie ndụ mara mma nke ụgbọ ala dị oke ọnụ nwere ike ịhụ.
Rodrygo na-aga Eziokwu LifeStyle. Ebe E Si Nweta Mirror.
Rodrygo Na-aga Eziokwu Eziokwu:
Nweta Ngọzi nke Ugwu: Tupu ọ gaa Europe iji sonyere Real Madrid, Rodrygo natara ngọzi n'aka ndị egwuregwu bọọlụ abụọ kachasị na Brazil bụ Pele na Senior Ronaldo.
Rodrygo Goes na Moddị Nlereanya Ya.
N'afọ ahụ 2001 nke amụrụ Rodrygo gbara ama ama nke a;
Nke mbu, ihe a maara dika mbuso agha 9 / 11 mere.
Ewere afọ ahụ 2001 dị ka “Oge anwụ nke Afọ Shark“. Afọ a dekọtara ọnụ ọgụgụ kasị elu nke mwakpo shark zuru ụwa ọnụ.
N'afọ 2001, a na -eji ọgwụ enyemaka Aids na -enweta ego ruru 90% chọrọ iji nyere aka lụso ọrịa na -egbu egbu ọgụ, ọkachasị n'Africa.
Nyochaa: Daalụ maka ị gụọ Rodrygo Goes Childhood Story gbakwunyere Eziokwu Untold Biography. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ.